हामी बिरामी किन हुन्छौ ? - Health Today Nepal
हामी बिरामी किन हुन्छौ ?
February 17th, 2019 बिशेषज्ञ लेख0comments
डा. ललितकुमार मिश्र,
हामी सबै बेलाबखत बाहिर जान्छौं र बाहिर खाना खान्छौं । साथी भाइहरूसँग भेटघाट गर्न जान्छौं, भिन्न भनिने ठाउँहरूमा सँगै घुम्न जान्छौं । त्यहाँ पाइने विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट खानेकुराहरूको स्वाद लिन्छौं । यसै क्रममा कसैलाई बाहिर खाना खाएपछि पेट खराब भइहाल्छ भने कसैलाई नयाँ ठाउँमा जाँदा त्यहाँको वातावरण मिल्दैन र बिरामी पर्छ ।
यहाँ प्रश्न यो आउँछ, किन यस्तो हुन्छ? हामी बिरामी हुनलाई दुई वटा आधारले काम गर्दछ । एउटा आफैंभित्र छ र अर्को बाहिरी वातावरणमा आधारित छ । हामीभित्रकै कारण र बाहिरको कारण । यी दुवै कारणलाई गहिरिएर विचार ग¥यौं भने थाहा पाउने छौं, यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्ध । हामी किन बिरामी हुन्छौं ? हामी सबै बाहिर जान्छौं र बाहिर कुनै होटेल या रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छांै । मलाई त मज्जा लाग्छ, फरकफरक चिजहरू ट्राई गर्नमा । मलाई लाग्छ, पक्कै पनि उनीहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ होला । बर्खाको याममा पानीमा रुझ्न पनि राम्रो लाग्छ । हामी सबै पानी परेको बेला कुनै न कुनै रूपमा थोर बहुत भिजेकै हुन्छौं । कोही त निथ्रुक्क पानीले भिजेका पनि हुन्छन्, त्यसमा पनि आफ्नै आनन्द छ ।
यसैगरी जाडोको याममा पनि हिउँ परेको हेर्न र हिउँमा खेल्न जान्छौं, खेल्छौं । राति ढिलोसँग पार्टीमा जाने पनि चलन हुन्छ । बिहे भोजमा जान्छौ, अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुन्छौं । यस प्रकारले हामी भिन्नभिन्न कार्यक्रमहरू पुग्छौं, धेरै मानिसहरूसँग भेटघाट गर्छौं । हामीमध्ये केही यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् । जो अफिसको समयबाहेक पनि अफिसमा काम गरिरहन्छौं । बिहान, दिउँसो र रातिको सिफ्टमा पनि काम गरिरहेका हुन्छौं । हामी सबैको वरिपरि जीव– जन्तुहरूको पनि बास छ । हामी काठमाडौंमा बस्छौं, यहाँको हावा यति स्वच्छ र सफा छ कि जीवजन्तुहरूमा कुनै कम्पिटिसन नै छैन । प्रत्येकले भरपुर स्कोप भेट्छन्, जीव–जन्तुहरूसँग सम्पर्कमा पुग्नको लागि ।
हामी सबै यही वातावरणमा बस्छौं, यही हावामा श्वास लिन्छौं । त्यहीका पानी पिउँछौं । हरेक चिज हामी सबैले प्रयोग गर्छौं । तर त्यसैमध्ये कसैको पेट खराब भइहाल्छ । कसैलाई आँखा पाक्ने रोग लाग्छ । अर्कोलाई अरू नै केही थोकको गडबडी हुन्छ । यसरी नै बर्खामा पानीमा भिजेकाहरू, हिउँमा खेलेकाहरूमध्ये कसैकसैलाई पोस्ट सिजनल बायरल इन्फेक्सन हुन्छ । सबैलाई हुँदैन । यस्तो किन हुन्छ ? हामीमध्ये कसैलाई हुन्छ कसैलाई हुँदैन । यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा लगातार घुमिरहन्छ । अरूलाई केही भएन, मेरै पेट किन खराब भयो ? मलाई नै किन भाइरल फिवर आयो ? यी सबै बाहिरका कारण हुन् । बाहिरको कारणले सबैलाई इफेक्ट गरिरहेको छैन । हामीमध्ये केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्रभावित बनाइरहेको छ ।
यस प्रश्नको उत्तरका लागि हामीले आफंैभित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ । के कारणले यो समस्या आइरहेको छ । ममा के कमी कमजोरी छ ? जसले गर्दा मलाई मात्र समस्या भइरहेको छ । बाहिरको अवस्थालाई राम्रो बनाउनको लागि धेरै प्रयास गरिएको छ । अचेल होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू हाइजिनको स्तर बढाइएको छ । पानीपुरी बेच्नेले पनि हातमा ग्लोब लगाएर काम गर्छ । मेडिकल फेसिलिटी पनि राम्रो छ । रोगबाट बच्न भेक्सिनेसन गराउँछौ । भिन्नभिन्न प्रकारका खोपले रोगबाट बचाउन मद्दत गर्दछ । सुविधा सम्पन्न अस्पताल र नर्सिङ होमहरूमा राम्रो उपचार पाइन्छ । यस प्रकार अरू धेरै विकल्पहरू पनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी किन बिरामी हुन्छौं ? हामी कहाँ बिरामीको कमी त छैन । बिरामी आई नै रहेका छन् ।
कुन प्रकारका र कस्ता बिरामीहरू आइरहेका छन् ? अचेल विशिष्ट प्रकारका बिरामीहरू बढिरहेका छन् । जस्तै, कसैलाई पोलन एलर्जी, कसलाई सन एलर्जी, गुलुटोन (गहुँ) को एलर्जी, डस्टएलर्जी, स्किन एलर्जी भइरहेको छ । सबैलाई त हुँदैन । मानौं एलर्जी हुनु अचेल फेसन नै भइसकेको छ । धेरैजसो केटाकेटीहरू या वयस्कहरूमा एलर्जी देखिइरहेको छ । यसको साथै धेरै मानिसमा अटोइमिनो कम्पलेन बढिरहेको छ । अटोइम्युनोको मतलब तपाईँको शरीरले स्वयंमा समस्या उत्पन्न गराउनु हो । जस्तै, मलटिपल न्युरोसिस, रियुमेटाइड, ग्यास्ट्री कम्पलेन, अर्थराइटिस, मेन्सुयल डिसर्डर, थाइरायड, पोलिस्टिकऔंभरी डिजिज, डायबिटिज, मेन्टल डिसअर्डर आदि ।
यस्ता रोगहरू धेरै बढेका छन् । एलर्जन या एलर्जी भनिए पनि यो एक किसिमको रोग हो । यो केही सीमित मानिसलाई मात्र हुन्छ । सबैलाई त हुँदैन, किन यस्तो हुन्छ ? यसको लागि हामीले आफैंलाई नियालेर भित्र हेर्नुपर्छ । यदि हामी हाम्रो शरीरलाई विभाजन गर्ने हो भने, यसमा दुई भाग पाउँछौं । शरीरको एक भाग देखिन्छ भने अर्को हिस्सा देखिँदैन । जो देखिन्छ त्यो ( स्थुल) बढी र जो देखिँदैन, त्यो हो दिमाग वा मन हो । यसले नै आफ्नो ऊर्जा, आफूभित्रको क्षमता, इच्छा, भावनालाई उत्पादन गर्दछ र यसको प्रतिक्रिया स्थुल शरीरमा देखिन्छ । बह्माण्डलाई नै हेर्दा पनि त्यही हो । एउटा पदार्थ र अर्को ऊर्जा छ । पदार्थ छ, त्यसमा हामी सबै छौं, घर छ, जमिन छ । अर्कोतिर ऊर्जा छ, जो हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको छ । जसले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्दछ । त्यसैले यो स्थुल शरीरलाई सञ्चालन र बचाइरहेको छ । यी दुवै पदार्थ र ऊर्जा एकआपसमा सम्बन्धित छन् । आपसी तालमेल राख्छन् र सन्तुलनमा बस्छन् । शक्ति र भौतिक पदार्थको आपसी सन्तुलनमा रहनु नै स्वास्थ्य रहनु हो । यी दुवैबीचको असुन्तलन नै अस्वस्थको कारण हो । हामी मानसिक रूपले होस् या शारीरिकले बिरामी हुन्छौं ।
Previous article चैतको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय परिवार योजना सम्मेलन
Next article एप्पोन कप क्रिकेटको उपाधि क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्सलाई